Darbiyada Istanbul oo lagu qurxiyay ubax RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDerbiyada Istanbul waxaa lagu qurxiyaa ubaxyada iyo meelaha metrobus joogtada ah
01 / 12 / 2013 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Metrobus, TURKEY
derbiyada lagu sharraxay ubaxyo Istanbul Metrobus joojiyo way iftiimeen, Istanbul degmada Metropolitan, derbiyada kulanka sharraxay ubaxyo, ciinwaanka la LED nalalka Metrobus istaago.
Sida laga soo xigtay war ah oo ay dawladda hoose ee Metropolitan ka sameeyey, aragtida cagaaran, beeraha iyo fasaxa degmada xadiday Jannooyin, isgoosyada magaalada, derbiyada, jidadka, hababka cusub shaqada on mawduucyada kala duwan ee meelaha sidii balli waxaa lagu soo bandhigay in İstanbullular'ın ah.
Xaaladdan oo kale, codsiga beerta cusub ee la soo bandhigay ayaa si gaar ah loogu horumariyay derbiyada isgoysyada, oo laga tirtiro astaamaha dusha sare ee naxdinta iyo jajabka. Ubaxyo xilliyeedka midabka ah ayaa loo qaabeeyey gegeda iyo darawallada ayaa la socday sawirro cajiib ah waxaana lagu siiyay safar dheraad ah oo raaxo leh. Darbiyada iftiinka ah waxay u jeesteen galbiyo farshaxan. Fikradaha farshaxan farshaxaneed ayaa loo sameeyay si loo iftiimiyo ubaxyada lagu beeray faafinta shaqada iyo booqashada dadka reer Istanbul fiidkii. In beerta xeegada iyo nalalka dhejinta, waxay ahayd "wallwasher" "luminaires taxane ah" ayaa la isticmaalay. Muujinta iftiinka buluuga ah iyo caddaanka ah ayaa loo doortay si ay u muujiyaan midabada ubaxyada muuqaalka iyo dabiiciga ah.
- Joojinta Metrobus waxay iftiimisaa nalalka ledha
Metrobus oo istaagay, oo bilaabay in loo furo isticmaalka muwaadiniinta naafada ah iyo dadka tabaalaysan oo leh wiishka iyo kor u qaadayaasha, ayaa muuqaal casri ah ku yeeshay iftiin cusub.
Nalalka cusubi waxay dadka deggan Istanbul ku kalsoon yihiin kalsooni waxayna bixiyaan muuqaal muuqaal ah oo ku saabsan aragtida quruxda badan ee magaalada.
waxbarashada nalalka, Bridge Bosphoru in kooxda Anatolian ee Istanbul, Altunizade, Acibadem, Uzunçayır, in Fikirtepe iyo Sogutlucesme stop Istanbul ee, halka xulka ka socda Yurub xerada Şükrübey, IETT, Küçükçekmece, xaafadda Jannada, Florya (Yeşilova), Beşyol, Sefaköy, Yenibosna ( Kuleli), Sirinevler (Atakoy), Bahcelievler, Incirli (Omur), Zeytinburnu, Merter, Cevizlibonds, Topkapı, Bayrampaşa (Maltepe), Barcaelona Caddesi, Edirnekapı Ayvansaray, Halicioglu, Okmeydanı, Perper in, Hospital SSK iyo dhac istaago Okmeydanı waxaa la hirgeliyey.
Xaaladda "Shaqada Aagga Sugida" waxaa lagu dabaqay duruufaha dib loo iftiimiyay iyadoo la tixgelinayo qaybaha dhismaha. LED darfaha nalalka leh total 101 13 kun oo dhinaca Yurub, halka dhinaca Anatolian la 669 9 darfaha LED la isticmaalay.
Magaalooyinka Argentine oo lagu qurxiyo diinta Islaamka
Dumarka waxaa lagu soo dhaweeyay ubaxyada HAVAIST
Marka loo eego Fatih Bridge Illuminated